July 2014 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ချ စ် သူ ဖ တ် ဖို့ စာ
Author: lubo601 | 3:42 AM | No မှတ်ချက် |
Thet Wai July 30, 2014 at 10:09pm
အချိန်များ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ကုန်လွန်လာခဲ့ပြီ။
ကုန်လွန်သွားခဲ့သော နေ့ရက်တွေတိုင်းမှာ အချိန်စေ့သွားလျှင် သူ့အလိုလို ထပေါက်ကွဲတော့မည့် ချိန်ကိုက်ဗုံးတစ်လုံးကို ရှေ့တွင်ချကာ သည်အတိုင်း ထိုင်ကြည့်နေရသူတစ်ယောက်၏ ခံစားချက်နှင့် ဆင်ဆင်တူသော ခံစားချက်မျိုး ကျွန်မထံမှာ ရှိနေခဲ့သည်။
Author: lubo601 | 3:32 AM | No မှတ်ချက် |
ဘွန်လေး ဘက်မှာ နေတုန်းက အိမ်ရှင်က အင်ဒီးယားလူမျုိးတွေ။
အိပ်ခန်း သုံးခန်းပါတော့... Master Bed Room မှာ အိမ်ရှင်မိသားစုနေတယ်။
မိသားစုဆို သူတို့မှာ ၄ နှစ်လောက် သားလေးတစ်ယောက် ရှိတယ်လေ။
တစ်ခန်းက သူတို့လူမျိုး ကျောင်းသူလေး ၂ယောက်နေတယ်။
လူတွေရဲ့ ပြုပြင်ဖန်တီးမှုနဲ့ သိပ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာ ချစ်စရာဖြစ်လာတဲ့ သက်ကြီးပု အပင်ငယ် ကလေးများကို လူတိုင်း တွေ့ဖူးကြပါလိမ်မယ် အဲဒီအပင်ပုလေးတွေကို ဘွန်ဇိုင်းလို့ ခေါ်ကြပါတယ်.. တစ်ချို့သော ဘွန်ဇိုင်းပင်များမှာ အပွင့်မပွင့်သော အရွက်ချည်း သက်သက် ရှိသော အပင် အမျိုးအစား များ ဖြစ်ပြီး အချို့မှာ ပန်းပွင့်လေးများ ပွင့်သော အပင်အမျိုးအစားကို ပြုပြင်ဖန်တီးထားသောကြောင့် အပင် ငယ်ငယ် သေးသေး ပုပုလေးများက တစ်ပင်လုံး ခက်ဖြာလှပစွာ ပွင့်ဝေနေတာဟာ ကြည့်လို့ ကောင်းလွန်းလှသလို စိတ်ဝင်စားဖို့လည်း ကောင်းလှပါတယ်.. သို့သော် ဘွန်ဇိုင်းဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်အမှန်ကို သေချာဂဃ သိသူ နည်းပါးပါလိမ့်မယ်.. ဘွန်ဇိုင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးနဲ့ ဘွန်ဇိုင်းပင် အကြောင်းကတော့ --
Bonsai လို့ ခေါ်တဲ့ စကားရပ်ဟာ Bon လင်ဗန်း Sai စိုက်ပျိုးခြင်း ဆိုတဲ့ စကား ၂လုံးကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားရပါတယ်..
ဓမ္မပန်းခင်း with Min Aung Khine and 42 others
တစ်ခါက မုဆိုးကြီးတစ်ယောက်ဟာ သူ့သားကို အသိပညာတစ်ခုပေးချင်လို့
သူတောလိုက်သွားရာကို ခေါ်သွားသတဲ့..။ တစ်နေရာလဲရောက်ရော တောင်ကမူလေးတစ်ခုမှာ ခွေးတစ်ကောင်က နေပူစာလှုံနေသတဲ့..။ဖခင်မုဆိုးကြီးက သူ့သားကိုသေသေချာချာကြည့်ခိုင်းပြီးနေပူစာလှုံနေတဲ့ ခွေးကိုမထိစေပဲခွေးရဲ့ ဘေးသို့ရောက်အောင် ခဲလုံးတစ်လုံးနဲ့ပစ်ပေါက်လိုက်တယ်..။
We are the Men. ဦးဘုန်း ►
ဓမ္မပန်းခင်း with Min Aung Khine and
တစ်ချိန်တုန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လူမည်းတွေရဲ့အိပ်မက် တစ်ခုရှိတယ်။ ကြွေးကြော်သံတစ်ခုရှိတယ်။
We are the men တဲ့။
မနက် မနက်ဆိုရင် ဈေးထဲမှာ နွားတွေ၊ ဆိတ်တွေ ရောင်းသလိုပဲ လူမည်းတွေက လန်ကွတ်တီနဲ့ ထိုင်နေရတယ်။ ဈေးလာဝယ်တဲ့ လူဖြူတွေက သူတို့အိမ် အတွက် ကျေးကျွန်လာဝယ်တာ။
ဘ၀ ဘ၀ ဆရာမ
“သြော်.. အေး.. ဟုတ်ပါတယ် ယောင်္ကျားရယ်၊ ကျောင်းဆင်းချိန် တော်တော်
ကျော်နေတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာက အလုပ်တွေ မပြတ်သေးဘူး။
ကျောင်းအပ်တွေက လာနေတုန်းဘဲ။ ဆရာဆရာမကနည်း၊ ကျောင်းသားက
များများမို့ ပါ။ ခုထိ ကျောင်းအပ်လက်ခံတာက မပြတ်သေးလို့ ပါ။ နောက် ဒီနှစ်က..”
Author: lubo601 | 10:23 AM | No မှတ်ချက် |
မိုးလေ ဝသနှင့် ဇလဗေဒ ဌာနမှပေးပို့သောသတင်းများအရ မိုးရေချိန်တိုင်းကရိ
ယာ ခြံအတွင်း ဖား ၁၀ကောင်အနက် ၆ကောင် အော်နေပါသဖြင့် ရွာရန်ရာနှုန်း
ဒုိုင်ယာရီအပုိုင်းအစလေးများ ( ၄ )
Author: lubo601 | 10:17 AM | No မှတ်ချက် |
Ven Pannasami July 15, 2014 at 11:02pm
ယခင်အာဏာရှင်များ လက်လွန်ခဲ့သော ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည်အရေးတွင် လျှပ်စစ်မီးကုိုပြည်ပသုို့ ပုံအော၍ရောင်းစားသည့်ကိစ္စလည်း အရေးတကြီးပါဝင်သောပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆုို ပါပြဿနာနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆုိုရာဝန်ကြီးက " လျှပ်စစ်မီးများကုိုပြည်ပသုို့ရောင်းစားခြင်းသည် ပုိုလျှံသောကြောင့်ဖြစ်သည် " ဟူသော အဆင်ခြင်မဲ့စွာ အဖြေကုိုပေးခဲ့သည်။ ထုိုစကားပြောပြီး၍ မကြာမီပင် လျှပ်စစ်မီးများမလုံမလောက်ဖြစ်၍ ပြည်သူများဆန္ဒပြကြသောအခါ သမ္မတအကြံပေး တစ်ဦးကလည်း " မီးမလာလျှင် ဖယောင်းတုိုင်မီး ထွန်းနေပါ " ဟု ကရုဏာမဲ့စွာဆုိုပြန် သည်။ ကျေးရွာပေါင်း ခြောက်သောင်း ( ၆၀၀၀၀ ) နီးပါးရှိသော ရွှေပြည်တွင် ကျေးရွာတစ်သောင်း ( ၁၀၀၀၀ ) ကုိုလောက်ကုိုသော်မှ နုိုင်ငံတော်အနေဖြင့် လျှပ်စစ်မီးလင်းအောင် ဆောက်ရွက်မပေးနုိုင်ဘဲ ဤစကားမျိူးပြောထွက်သည်ကုို အံ့သြမဆုံးဖြစ်မိသည်။
Author: lubo601 | 10:16 AM | No မှတ်ချက် |
ဖေ့ဘုတ်ပေါ်က ရယ်ပြီးမောရတဲ့ ကာတွန်းများ
Author: lubo601 | 10:15 AM | No မှတ်ချက် |
`` ဧည့်ခန်းထဲကအပုံကြီး ဘယ်သူပါတာလဲဟေ့ ´´
စစ်အာဏာရှင်သာဂိကြီးရဲ့ ပုဂံညောင်ဦးခရီးစဉ်မှာ အဲဒီအချိန်က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူက ထိုင်ကန်တော့ခဲ့ဖူးပါတယ်၊ ညဘက် နိုင်ငံတော်ဧည့်ရိပ်သာကြီးမှာ သာဂိကြီးကအတူပါလာတဲ့ ဝန်ကြီးတွေနဲ့ထိုင်ပြီး စကားစမြည်ပြောနေချိန်မှာပေါ့၊ အဲဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဆက်တီပေါ် ကနေ မြ်းပြင်ပေါ်ကိုဆင်းပြီး သာဂိကြီးကို လက်အုပ်ချီလိုက်တယ်၊
အိမ်ထောင်သက် ၅နှစ်မှရတဲ့ကလေးနိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ဥပဒေသစ်တရပ်ကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာ လိုက်ရာဝယ်… လက်ထပ်ထားပြီး ငါးနှစ်အတွင်းမှာ အကြင်လင်မယားတိုင်း ရင်သွေး တယောက် ရရှိထားပြီး ဖြစ်ရပါမယ်တဲ့။ ဒီတာဝန်ကို မကျေပွန်ခဲ့ရင် သက်ဆိုင်ရာမှ ကြီးကြပ်၍ ယောက်ျားတယောက်ကို
စေလွှတ်ကာ ထိုအိမ်ထောင်ရှင်မအား မိခင်တယောက် ဖြစ်လာစေရေးအတွက် လိုအပ်သည်များကို
တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါသတဲ့။
ဒုိုင်ယာရီအပုိုင်းအစလေးများ ( ၃ ) ရွှေပြည်တွင် တွေ့ကြုံမိသမျှ
Ven Pannasami July 15, 2014 at 12:01am
ရွှေပြည်ကုိုပြန်ရောက်လျှင်ရောက်ချင်း အဓိကအသုံးပြုလုိုသည့်ဆန္ဒမှာ ဖုန်းနှင့်အင်တာနက်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းနှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးသည် ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် ပညာရေးလေ့လာမှုများ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ နုိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများစသည့်စသည့်အရေးအရာတုို့အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်နေသော်လည်း ရွှေပြည်သူ/သားများတုို့အတွက်မူ တမူထူးနေလေသည်။ အင်တာနက် အင်တာဖြူတုို့ထက် နေ့စဉ် မိသားစုစားဝတ်နေရေးပြဿနာကုိုသာ အလေးပေးနေရသည်ကိုတွေ့မိသည်။ အကယ်၍ အင်တာနက်ကုိုသုံးသည်ဆုိုလျှင်လည်း စီးပွါးရေး ကြီးပွါးရေး ဆက်သွယ်ရေး သွားလာရေး ပညာရေးစသည်တုို့အတွက် အသုံးပြုမှုထက် ဂိမ်းဆော့ဖုို့ အရေးနှင့် အီစီကလီအရေးစသော အချိန်ဖြုန်းသည့်လုပ်ငန်းများတွင်သာ အများစုအသုံးပြုနေကြကသည် ကုိုတွေ့မြင်ကြားသိရသည်။ ဤအချက်က အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးသည် နေ့စဉ်လူမှုဘဝ၏ဖြတ်သန်းမှု ထဲသုို့ လက်တွေ့ကျကျ ထဲထဲဝင်ဝင်မရောက်သေးကြောင်းကုို ဖေါ်ပြနေခြင်းပင်သည်။
ကမ္ဘာကျော်ဓာတ်ရှင်မင်းသားကြီး ချောင်ယွန်ဖတ်နှင့်လွန်စွာဆင်တူ၍ အမြဲတမ်း၊ မညှိုးပန်းပမာ၊ရှိနေတတ်သည့် ဆြာဒင်တစ်ယောက် နေပူလိုက်မိုးရွာလိုက် ၊ဖောက်ပြန်လျက်ရှိသည့် ဥတုသမယကာလ၌ ဇရာ၏မိတ်ဖက် ဗျာဒိတည်းဟူသော တုပ်ကွေးကြောင့် ၊ရုပ်အဆင်း အင်္ဂါသည် ဂျက်စပဲရိုးရုပ်သွင်၊၊
ခွေလေးနဲ့ အတူတူ ခြေထောက် ပြန်ကောင်းခဲ့တဲ့ သခင်မလေး
Thatoe Kyaw and KhingKhing Su shared YoYarLay's photo.
Lindsey လို့ အမည်ရတဲ့ အသက် ၂၈ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးဟာ တစ်ချိန်တုန်းက ဂျာမနီ နိုင်ငံက အက ပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဇာတ် တစ်ခုမှာ အက အက်ဆီဒန့် တစ်ဦးကြောင့် ခြွေခွင် လွဲသွားပြီး တွန်းလှဲပေါ်မှာသာ နေရတဲ့ ဘဝကို ရောက်သွား ပါတယ်။
မီးနီ၍ ရပ်စောင့် နေသော ယာဉ်ကို တိုက်မိပြီး မောင်းနှင် ထွက်ပြေးစဉ် အခြား ယာဉ်များကို ဆက်လက်တိုက်မိ
လျှပ်စစ်ဝါယာရိန်းတပ်ဆင်ရာမှ အမျိုးသားတစ်ဦး ဓါတ်လိုက်သေဆုံး
၁ မိနစ် ၂၅ ကျပ်ဖြင့် ဖုန်းပြောနိုင်မည့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှု
မံစီမြို့နယ် တရားရုံးခြံစည်းရိုး အနီး မိုင်းပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား
တန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို လက်ခံပါက အပစ်ရပ်စာချုပ် လက်မှတ် ထိုးမည်ဟု လိုင်ဇာအစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်
ဘန်ကောက်သွားမည့် တရားမ၀င် မြန်မာနိုင်ငံသား ၈ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
သဲကုန်းမြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်၊ လယ်ဧက ၁ သောင်းကျော် ရေနစ်မြုပ်
မောင်တောတွင် ပြစ်မှု ကျူးလွန်ပြီးနောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေး ခိုလှုံမှုများရှိ
မြန်မာငွေ သိန်းနှစ်သောင်းကျော် တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းဖြူတွေနဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေ ဖမ်းမိ
၃ နှစ်အတွင်း ထီပေါက်ပြီး လာမထုတ်သည့်ငွေ ကျပ်ငွေ ၇ ဘီလီယံနီးပါးရှိ
မင်္ဂလာဒုံတွင် လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ် (ဓာတ်ပုံ)
လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Malinowski နဲ့ VOA တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
ကောင်းကင် အပေါက်နဲ့ မိုးခေါင်ရေရှား ရပ်ဝန်း (၂)
ဗိုလ် နင့် July 28, 2014 at 9:54am
နံနက်စောစော လမ်းလျှောက်ထွက်လာသော ဗိုလ်သိုက်တစ်ယောက် ဆြာဒင်နှင့်လမ်းမှာ ဆုံမိကြ၏။ဆြာဒင်အူမြူးနေပုံရသည်။
ဆြာဒင်။ ။ အပြင်ထွက်လာခါနီးမှ အိမ်ကဘွားတော်ကို ဖနောင့်နဲ့ဆယ်ချက်လောက်ပေါက်ပစ်ခဲ့ရသေးဗျာ။
MPT လူလေးသို့အဘစည် ရဲ့ပေးစာ....။
လူလေး MPT အဘ မင်းကို စိတ်တိုတယ်ကွာ ..လူလေးစိတ်တော့မဆိုးနဲ့.။
အဘ က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောတတ်တယ်..။ လူလေး သိထားရမှာက MPT ကို မြန်မာလူထု တစ်ရပ်လုံးက အားပေးချင်တယ် ဆိုတာပါပဲ..။
နိူင်ငံခြားက ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာတွေ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတယ် ...အေး ဒါပေမယ့် အဘတို့ တွေ အားပေးချင်တာက ကိုယ့် မြန်မာ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာကိုပဲ ဆိုတာ လူလေး သိစေချင်တယ်..။
ဒုိုင်ယာရီအပုိုင်းအစလေးများ ( ၂ ) ပုိုးစုန်းကြူးတစ်ကောင်၏ဆန္ဒ
Author: lubo601 | 10:49 PM | No မှတ်ချက် |
Ven Pannasami July 12, 2014 at 10:48pm
ရွှေပြည်ကုိုပြန်ရောက်၍ မကြာမီပင် တရားဟောပလ္လင်ပေါ်သုို့တက်ရသည်။ ရန်ကုန်မြို့ တွင် ရပ်ကွက်တုိုင်းလမ်းတုိုင်းလုိုလုိုပင် တရားပွဲများအပြိုင်အဆုိုင်ကဲ့သုို့ထင်ရလောက်အောင်ပင် ကျင်းပကြသည်။ ပြည်သူများကလည်း နာမည်ကြီးဓမ္မကထိကအကျော်အမော်ဆရာတော်များ၏ တရားတော်များကုို အဝါးဝစွာ နာကြားထားကြသဖြင့် မိမိလုိုအတွေ့အကြုံနုနယ်သော ဓမ္မကထိက တစ်ပါး၏ ဟောပြောချက်တုို့ကုို စိတ်ဝင်စားနုိုင်ပါ့မလား ဟူသော သံသယစိတ်ကလည်း မဝံ့မရဲဖြစ်အောင် ဆွဲချနေတော့သည်။ သုို့သော် မိမိလေ့လာထားမိသမျှကုို ပြောချင် သိစေချင်သော ဆန္ဒကားပြင်းပျလျှက်သာ ရှိသည်မုို့ တက်ကြွစွာပင်ဟောပြောဖြစ်ခဲ့သည်။ မိမိ၏ ဟောကွက်ပြောကွက်များမှ အားနဲသည့်အရာများကုို မိတ်ဆွေရဟန်းတော်များနှင့်ဒကာ ဒကာမများက အပြုသဘောဆောင်သော စိတ်ထားကောင်းများဖြင့် အကြံပြုဆောင်မကြသောကြောင့် မိမိ၏အားနဲချက်များကုို ပြင်ဆင်နုိုင်ခဲ့သည်။
Shwe Eaim Si
ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမြို့ကြီးက မင်းနေပြည်တော် ဖြစ်ခဲ့တာ နဲ့အညီ လည်စရာ ပတ်စရာ သမိုင်း ၀င်နေရာတွေဟာ လွန်စွာမှ ပေါများပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာမှ မြန်မာသိ ကမ္ဘာသိ သမိုင်းဝင် ရှေးဟောင်း ဦးပိန် တံတားကြီးလည်း တစ်ခု အပါအ၀င်ပါပဲ။ မန်းလေးကို လာရောက် လည်ပတ်ကြတဲ့သူတိုင်း မသွားမဖြစ် သွားကြတဲ့ နေရာ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းလှ လယ်သမားများ မိုးစပါးစိုက်စရိတ်ချေးငွေ မရလို့ အခက်တွေ့
တမီလ် ဒုက္ခသည်တွေကို ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း ပို့ဆောင်
တာမေးလ် ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံသူ တွေကို စတင်စစ်ဆေးမယ်
တရုတ်က နယ်စပ်မှတ်တုိုင်တွေကုို ဧကရာနဲ့ချီပြီး မြန်မာခြမ်းမှာ စုိုက်ထူ (ရုပ်/သံ)
သဘာဝကို အပြည့်အ၀ စားသုံးရခြင်း
ကရင်နီအမှတ် ၁ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် လူဦးရေစာရင်း စစ်ဆေး
အစာအဆိပ်သင့်မှု(၅)ရက်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံ ဖြစ်ပွား
ယူကရိန်းမှာ MH17 လေယာဉ်ကို ပစ်ချခဲ့တာဟာ "စစ်ရာဇဝတ်မှု" မြောက် ဟု ကုလ ဆို
တိုက်ပွဲများကြောင့် ပစ်ချခံ မလေးရှားလေယာဉ်ကိစ္စ စုံစမ်းရေး အခက်ကြုံ
အရက်စွဲစွဲ မြဲမြဲသောက်နေတဲ့ လူနာကို ဆရာဝန်က.....
"ခင်ဗျား အရက်သောက်လာတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ"
"နှစ်သုံးဆယ်အတွေ့ အကြုံထဲကနေ အရက်ရဲ့ မကောင်းပုံလေး တစ်ခု လောက်
နှလုံးသားသံစဉ်များ with Kyar Phyu Nwe and 49 others
ထိန်ပင်ရွာသူကြီးဦး ဖိုးခ တစ်ယောက် အိမ်ရှေခန်းမှာခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် လျှောက်နေသည်မှာ အတော်ကြာနေပေပြီ။ မကြာခဏရပ်ပြီး သက်ပြင်းလည်းချနေတတ်သည်။လက်ထဲက ဆေးတံကိုမီးညှိပြီး
ပက်လက်ကုလားထိုင်မှာထိုင်ချလိုက်သည်။ အိမ်အတွင်း ကိုလှမ်းပြီး
``လာပပီ ဖေဖေ ´´
" ပိုက်ဆံနည်းနည်းလောက် ချေးပါလား " လို့
သူ့ကို မချေးချင်ဘူးဆိုလျှင် အဖြေသုံးမျိုး ဖြစ်လာနိုင်
( ၁) မုသား အဖြေ
( ၂) သစ္စာ အဖြေ
( ၃) ပညာ အဖြေ
Thorn Set May shared Sky Blue's photo.
စကားပြန်လုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ အမှတ်မထင် ဆုံဖြစ်ကြပါတယ်။ မတွေ့ရတာကြာပြီမို့ စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့နေမိကြတယ်။ သူငယ်ချင်းက သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကိုပြောရင်း နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေး ဆက်စပ်မှုရှိနေတဲ့အကြောင်း စကားရောက်သွားကြတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ အေးချမ်း တည်ငြိမ်လာတာနဲ့အမျှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ဦးမော့လာပြီး တိုးတက်လာမှာ အမှန်ပါပဲ။
ဒုိုင်ယာရီ အပုိုင်းအစလေးများ ( ၁ ) ပုိုးစုန်းကြူးတစ်ကောင်၏ ဆန္ဒ
Ven Pannasami July 10, 2014 at 9:50pm
မိမိသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် အမိရွှေပြည်သုို့ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်မှန်း မသိဘဲ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အိန္ဒိယမှလည်း ပြန်ခဲ့ဖူးသောကြောင့် ပြန်ခဲ့ဖူးသည့် အကြိမ်ရေကို သေချာစွာမှတ်မထားမိတော့ပေ။ ဖင်လန်နုိုင်ငံမှ ပြန်ရောက်သည်ကား နှစ်ကြိမ်မြောက်ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်လေဆိပ်သုို့မဆင်းသက်မီ ကောင်းကင်ယံမှရန်ကုန်မြို့ ၏ အစွန်တစ်နေရာကုို မြင်ရသည် ဆုိုလျှင်ပဲ ရွှေပြည်၏အမည်ဖေါ်၍မပြနုိုင်သော အရိပ်အရောင်နှင့်အငွေ့အသက်တုို့က ရင်ထဲတွင်ဆုို့နင့်စွာ ခံစားစေသည်။ ရွှေပြည်ကြီးသည် သူ့ထံသုို့ပြန်လာကြသည့် သူ၏သားသမီးများဖြစ်သော ပြည်သူပြည်သား မှန်သမျှကုို ထုိုကဲ့သုို့ ဆုို့နင့်အောင်ကလူကျီစယ်တတ်သော အလေ့အထရှိပုံပေါ်သည်။ လေယာဉ်ပေါ်မှ ဆင်းသက်ပြီး၍ Immigration ကုို ဖြတ်ကျော်သောအခါ တစ်ခါတစ်ရံ မနှစ်မြို့ ဘွယ်ရာ ဓာတ်ပုံရုိုက်ခြင်းကုို ခံရသည်။ လေဆိပ်မှပြန်လည်ထွက်ခွါသည့်အခါတုိုင်းတွင်မူကား အမြဲဓာတ်ပုံရုိုက်ယူသည်ကုို ကြုံရသည်။
ဒုက္ခသည်များအတွက် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ အိမ်ပြန်ချိန်ဖြစ်စေလို
ကြေးနီစီမံကိန်းနယ်မြေ ပဋိပက္ခ ရွာသားများကို အရေးယူမည်
အငှားယာဉ်နှင့် ဆိုင်ကယ်တို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိသဖြင့် (၁)ဦးသေ၊ (၁)ဦးဒဏ်ရာ
လမ်းဘေးတွင်လမ်းလျှောက်သွားနေသူ ယာဉ်တိုက်ခံရသဖြင့် သေဆုံး
ငါးပိစက်မှ လုပ်သားတစ်ဦး ငါးပိစက်ကြိတ်လုံးထဲသို့ လက်တစ်ဖက်ညပ်
သန်းချီ တန်ဖိုးရှိ ရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဓဆင်းထုတော် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင်ဖမ်းမိ
ကျောက်တော်မြို့နယ်တွင် ဘုရားဆင်းထုတော် (၈)ဆူ ထပ်မံဖျက်ဆီးခံရ
ကွန်ကရစ်လမ်းမြင့်လာမှုကြောင့် ကွန်တိန်နာကားနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုး တိုက်မိမှု ဖြစ်ပေါ်
ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်အချိန်တွင် မြို့လယ်လမ်းတွင် ဆိုင်ကယ်စီးသူများ အန္တရာယ်ကင်းစွာမောင်းနှင်သင့်
လေယာဉ်ပျက်က အလောင်းတွေ ပြင်သစ်ကို သယ်မယ်
အယ်လ်ဂျီးရီးယား လေယာဉ်ပျက်က Black Box တစ်ခု ထပ်တွေ့
မိုးရွာသည့်ကြားမှ သာကေတ(၁)ဈေး မီးလောင်
ကျောက်မဲမြို့ မရဲစခန်းတွင် အချုပ်ခန်းဖောက်ဖျက်ထွက်ပြေးမှုဖြစ်ပွား၊ ၃ ဦးသေဆုံး
အစ္စရေးနဲ့ ဟားမာ့စ်အကြား ၁၂နာရီကြာ အပစ်ရပ်
မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု မသျှားထွဋ်အိန္ဒြာ ကို ရွေးချယ် (ရုပ်/သံ)
Author: lubo601 | 6:47 PM | No မှတ်ချက် |
ယခု တင်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ ၁၉ ရာစု ၂၀ရာစု ၂၁ ရာစုတွေမှာ ကျော်းကြားသူ တစ်ရာမှာ ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်တဲ့ မာရီလင်မွန်ရိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ (ဒုတိယက အေဘရာဟင်လင်ကွန်း၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်က မာသာထရီဇာ တို့ဖြစ်သည်။)
မာရီလင် မွန်ရိုးဟာ မိတ်ဆက်စရာမလိုတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ ။
ဒုိုင်ယာရီအပုိုင်းအစလေးများ ( ၃ ) ရွှေပြည်တွင် တွေ့...
ဒုိုင်ယာရီအပုိုင်းအစလေးများ ( ၂ ) ပုိုးစုန်းကြူးတ...
ဒုိုင်ယာရီ အပုိုင်းအစလေးများ ( ၁ ) ပုိုးစုန်းကြူး...
ဟာသ အသုတ်စုံ (၁၁)
စီးပွားရေး အောင်မြင်စေဖို့ ဆောင်ရန် ၅ ချက်
#‎ဘယ်သူမှားတာလဲ‬ (၁၈ ပလပ်ဗျို.)
မာယာများတဲ့ အကယ်ဒမီပွဲ ( ရေးသူ- ကျော်သူ )
ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏စာပေအနုပညာ (၀ါ) မှိုင်းဗေဒ
ဟာသ အသုတ်စုံ (၁၀)
" ထောင်ဝန်ထမ်း ဆိုးသလား "
*နေရောင်အောက်က ကား Dashboard ပေါ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ GPS*
DON'T TRUST READY MADE OF CHINA
ဟာသ အသုတ်စုံ (၉)
သုံးချောင်းထောက်မပါဘဲ ကင်မရာ ရိုက်ချက်တွေ တည်ငြိမ်...
လုံးဝ မရိုးတဲ့ ရိုးရိုးလေး
ဒီထက်မပိုရင်တောင် မလျော့တဲ့ စွမ်းအားရှင်ယောင်္ကျားသာ...
ရှေ့ဆောင်လမ်းပြကောင်းဖို့ အရေးကြီးသည် ။
တီ မျှော့ ကျွတ်နှင့် မိုးစွတ် နေပူ ဆင်းရဲဟူသည်
Heavenly Virus (၅)